UPDATE: Puntland oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsan kooxda Daacish | HalQaran.com
UPDATE: Puntland oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsan kooxda Daacish
Boosaaso (Halqaran.com) – Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Maamulka Puntland ee loo yaqaano PSF ayaa waxaa howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen toga Miraale ee Gobolka Bari, halkaas oo la sheegay inay ku dileen Xubno ka tirsan Kooxda Daacish.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysa ayaa waxaa ay sheegeen inay wehlinayeen ciidamada Gaarka ah ee Marineska, isla markaana ay howlgalka ku dileen Afar Xubnood oo ka tirsan Kooxda Daacish.
Deegaanka howlgalka laga fuliyey ee Toga Miraale ayaa qiyaastii 27 km dhanka Bari waxaa uu ka xigaa magaalada Boosaaso, waxaana saraakiisha ay sheegeen in howlgaladooda ay noqon doonaan kuwa sii socda.
Howlgalka Ciidamada Puntland ay ka sameeyeen deegaano u dhow Boosaaso ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli howlgal dhawaan laga sameeyey Boosaaso lagu soo qabqabtay dad looga shakisan yahay Alshabaab iyo Daacish oo tiradoodu gaaraysay 57 Qof.
Puntland oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsan kooxda Daacish